करीनालाई ‘बेबो’ श्रद्धालाई ‘चिरकुट’ भनेर घरमा बोलाइन्छ, अन्य सुपरस्टारका पनि छन् यस्ता निकनेम – live 60media
करीनालाई ‘बेबो’ श्रद्धालाई ‘चिरकुट’ भनेर घरमा बोलाइन्छ, अन्य सुपरस्टारका पनि छन् यस्ता निकनेम
एजेन्सी । तपाईंले उनीहरूको नामबाट बलिउड स्टारहरूलाई चिन्नुहुन्छ होला । तर के तपाइँ तिनीहरूको उपनामहरूका बारेमा थाहा पाउनुभएको छ ? यहाँ धेरै कलाकार छन् जसको उपनाम उनीहरूको घरमा बोलाइन्छ। जस्तै ऋषि कपूरको चिन्टू र करीना कपूरको बेबो। बलिउडमा धेरै सेलिब्रेटीहरू छन् जसको उपनाम धेरै सुन्दर र प्यारा छ।
ऋषि कपूर ‘चिन्टु’ : बलिउडका दिग्गज कलाकार र दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूरलाई उनको वास्तविक नाम मात्र थाहा छ। तर उनलाई घरमै चिन्टु भनिन्थ्यो। ऋषि कपूरको यो उपनाम उसको व्यक्तित्व जस्तो छ।
करीना कपूर खान ‘बेबो’ : सैफ अली खानकी श्रीमती करीना कपूर खानलाई सबैले करीनाको नामबाट जान्दछन् । तर केही फ्यानहरूले उनलाई उनको उपनामबाट चिन्छन्। करीना कपूर खानको उपनाम ‘बेबो’ हो । घरमा सबैले करीनालाई मायाले बेबो भनेर बोलाउँछन् । उनका फ्यानहरूले करीनाको यो नामलाई धेरै मन पराउँछन्।
करिश्मा कपूर ‘लोलो’: हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौं कि कपूर परिवारमा निक नाम राख्ने चलन रहेको छ। करीना कपूर पछि उनकी दिदी करिश्मा कपूर हुन्। यस बलिउड अभिनेत्रीलाई उनको घरमा लोलो भनिन्छ।
रणबीर कपूर ‘रेमंड’ : ऋषि कपूरले आफ्नो छोराको नाम रणबीर कपूर राखे । तर उनकी आमा नीतू कपूरले उनको छोरोलाई रेमंड भन्छिन् । वास्तवमा, रणबीर कपूर सधैं आफूलाई फिट र राम्रो राख्छन्। यही बानीलाई देखेर उनकी आमा नीतू कपूरले उनको नाम रेमंड राखिन् ।
रितिक रोशन ‘दुग्गु’: ऋतिक रोशन पनि बलिउड सुपरस्टार राकेश रोशनका छोरा हुन्। घरमा जस्तो सबैलाई गुड्डूको नामले राकेश भनिएको छ। त्यस्तै रितिकलाई दुग्गु पनि भनिन्छ।
अक्षय कुमार ‘राजु’ : बलिउडका सुन्दर अभिनेता अक्षय कुमारलाई उद्योगका मानिसहरू र तिनका फ्यानहरूलाई अक्की भनेर चिनिन्छ। तर अक्षयको वास्तविक उपनाम राजु हो। उसको घरका साथीहरू र केही साथीहरू उनलाई राजू भनेर बोलाउँदछन्।
श्रद्धा कपूर ‘चिरकुट’ : बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरको निकको नाम पनि छ। उसलाई घरमा र उसका घनिष्ठ मित्रहरूलाई चिरकुट को नामले बोलाइन्छ। उनलाई यो नाम स्कूले साथी र बलिउड अभिनेता वरुण धवन दिएका छन्।
प्रियंका चोपडा ‘मिमी’ : बलिउड र हलिउडको शानदार अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई घरमा मिमी भनेर चिनिन्छ। उनले यो नाम पाए किनभने प्रियंकाले बाल्यकालमा धेरै मानिसहरूलाई नक्कल गर्थिन । जसको कारणले गर्दा, घरका सबैजनाले उनीहरूलाई मीमी भनेर बोलाउन थाले । यसै समयमा प्रियंकाका धेरै प्रशंसकहरूले उनलाई देसी गर्लको नामबाट बोलाउँदछन्।
← सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको भाउ
श्वेता खड्काको विवाहपछी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले किन यस्तो भनिन ? (भिडियो सहित) →